AKHRISO: Somaliland ashtako ka dhan ah DF Somaliya u gudbisay Beesha Caalamka +(War-saxaafadeed) – HalQaran.com
Hargeysa (Halqaran.com) – Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in aan wax shaqo ah ku laheyn nidaamka doorashooyinka Soomaaliya, iyagoo ashtako ka dhan ah Dowladda Federaalka u gudbiyay Beesha Caalamka.
War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaah dibadda ee Somaliland oo la ogeysiiyay Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo guud ahaan Beesha Caalamka ayaa lagu xusay in Somaliland aysan wax shaqo ah ku laheyn nidaamka doorashooyinka Soomaaliya.
Somaliland oo aamisan inay ka go’day Soomaaliya inteeda kale ayaa War qoraalkan ka soo baxay lagu sheegay in 30 sano kaddib ay Somaliland tahay ‘dal xor ah‘ oo leh nidaam doorasho oo dimuqraadi ah, sida lagu xusay war-saxaafadeedka wasaaradda.
Waxayna Shacabkeeda ku nool deegaannada Somaliland ugu baaqday, inay ka feejignaadaan cid kasta oo cadow ku ah, islamarkaana hal meel uga soo wada jeestaan.
War-saxaafadeedka ka soo baxay Somaliland ayaa ku soo beegmaya, waqti Soomaaliya ay galeyso doorasho, islamarkaana xubnaha Baarlamaanka labada Aqal kuk mataleya Somaliland lagu dooranayo Caasimadda Muqdisho.
Haddaba halka hoose ka akhriso War-saxaafadeedka Somaliland:
Tags: ashtako, dal dimuqraadi ah, dowladda Somaliland, gudbin, nidaamka doorashada, Xukuumadda Somaliland
One thought on “AKHRISO: Somaliland ashtako ka dhan ah DF Somaliya u gudbisay Beesha Caalamka +(War-saxaafadeed)”
Odayaal cirroobay oo 30 sanadood ku dhowaad hadal laga hoosqaadi waayay ka khajilaynin, caqliyeysanaynin oo ka waantoobaynin masiibadeeda ayay leedahay xaqiiiqdii. Beesha Caalamku ma hadda oo 2020ka lagu suganyahay ayay muxtaaj u tahay in wax laga ogaysiiyo arrimaha iyo siyaasadda Soomaaliya? Bal nacasnimada intaas la’eg!
Beesha Caalamku muddadaas ay teer iyo qabtii Soomaaliya la soo tacaalaysay wax cusub oo ay haddeer u baahantahay in dalkan laga la socodsiiyo ma jiraan sideeda ba. Cirrooleyaashan weli Hargeysa ka jabhadeynaya mar kasta oo ay afka furtaan adduunyadu way ku maadsataa oo aad u la yaabtaa, in kasta oo fadeexeynta tooska ah looga la turayo. Haddii ay Beesha Caalamku dan ka leedahay oo ayna oggoshahay 30 sanadood ku dhowaad kuma aysan qaadateen in ay “Somaliland” weli aqoonsan waydo. Diidmada diblumaasiyadeed aamuusnaanta ayaa laga dhugtaa. Warqaddaas iyo “ogaysiiska” ay xambaarsantahay waa mid aad loogu qoslo run ahaantii.
Isbeddellada siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka haatan ka hirgalaya waa kuwo xawli ku socda oo saadaalaha khubarada uugu ruugcaddaasan xataa in badan ku guux dheereeyay oo kaga yaabiyay. Guud ahaan, mandiqadda Geeska Afrika, gaar ahaanna dalalka marinka Badda Cas saaran, waxaa iminka toos loogu hayaa diiradda ugu weyn ee awoodaha siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida sida qaalibka ah isku hardiya. Heer mandiqadeed ayayna ku la xisaabtamayaan ee dal ka dal ma aha. Waxaa xusida mudan in loollankan awal waddamada reer Galbeedka iyo Shiinaha ka dhexeeyay ay ku soo biireen dalalka Muslimka Sunniga ah uugu tunka weyn, sida Turkiya iyo Khaaliijka Carabtu.
Haddaba, Beesha Caalamku diyaar u ma aha oo xiiso u ma hayso Soomaaliya oo jiritaankeeda iyo midnimadeeda qarannimo la khalkhaliyo. Odayadan Hargeysa ka jabhadeynaya doorashada Soomaaliya u qorsheysan jaa siyar oo dadban baa lala baalmaray oo waxaa doorashada dadban Woqooyi Galbeed u qaabilsan oo maareyn doona issimada guud iyo xubnaha dowladda federaaalka ku matalaya. Kuwani xisaabta waa laga saaray ee in ay iska quustaan oo ay fadeexadda iska dhimaan ayaa hadda loo qaatay. Beesha Caalamku 30 sanadood ayay iska dhegatiraysay oo mowqifkeeda wax beddelaya ma jiraan. Haddii kale AMISOM iyo ciidamo UN ah ayaa geyigaas la soo dhoobi doonaa sida qorsheyan.